हरिशयनी एकादशी - विकिपिडिया
आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी अथवा देवशयनी एकादशी	भनिन्छ । यस दिनमा नेपाल र भारत लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा बसोवास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले व्रत राख्नुको साथै एक पर्वको रुपमा मनाउने गर्दछन् । पुराणहरूका मतानुशार भगवान विष्णु यस दिन देखि चार महिनासम्म (चातुर्मास) पातालमा राजा बलिको द्वारमा निवास गरेर कार्तिक शुक्ल एकादशीमा फर्कन्छन् । यही प्रयोजनले यस दिनलाई 'देवशयनी' तथा कार्तिकशुक्ल एकादशीलाई 'प्रबोधिनी' एकादशी भनिन्छ ।
१ देवशयनी एकादशी व्रतविधि
देवशयनी एकादशी व्रतविधिसम्पादन
एकादशीको दिन प्रातःकाल उठेर घरको साफ-सफाई तथा नित्य कर्मबाट निवृत्त हुने । स्नान गरेर पवित्र जल घरमा छर्कने । घरको पूजा स्थल अथवा कुनै पनि पवित्र स्थलमा प्रभु श्रीहरि विष्णुको सुन, चाँदी, तामा अथवा पितलको मूर्ति स्थापना गर्ने । तत्पश्चात उसको षोड्शोपचार सहित पूजन गर्ने र त्यसपछी भगवान विष्णुलाई पीताम्बर आदिले विभूषित गर्ने । तत्पश्चात व्रत कथा सुन्नु पर्छ । त्यसपछी आरती गरेर प्रसाद वितरण गर्ने । अन्तमा सेतो चादरले ढाकेको गद्दा-तकिया भएको खाटमा श्री विष्णुलाई शयन गराउनु पर्छ । व्यक्तिलाई यि चार महीनाको लागि आफ्नो रुचि अथवा अभीष्टका अनुसार नित्य व्यवहारका पदार्थहरूको त्याग र ग्रहण गर्ने ।
आजको दिन के त्याग गर्ने- मधुर स्वरको लागि गुड, दीर्घायु अथवा पुत्र-पौत्रादिको प्राप्तिका लागी तेल, शत्रुनाशादिको लागी तिलको तेल, सौभाग्यको लागि मिठो तेल, स्वर्ग प्राप्तिको लागी पुष्पादि भोग, प्रभु शयनका दिनहरूमा सबै प्रकारका मांगलिक कार्य जहाँसम्म हुनसक्छ नगर्ने । खाटमा सुत्ने, भार्यासँग मैथुन गर्नु, झूठो बोल्नु, मांस, मह र अरुले दिएको दही-भात आदिको भोजन गर्नु, मूला, पटोल एवं भण्टा आदिलाई पनि त्याग्नु पर्छ ।
एक पटक देवऋषि नारदजीले ब्रह्माजीसँग यस एकादशीका विषयमा जान्ने उत्सुकता प्रकट गरे, ब्रह्माजीले उनलाई बताए- सत्य युगमा मान्धाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य गर्दथे । उनको राज्यमा प्रजा निकै सुखी थिए । भविष्यमा के हुन्छ, यो कसैलाई थाह थिएन । अतः उनी पनि यस कुराबाट अनभिज्ञ थिए कि उनको राज्यमा शीघ्र भयंकर अकाल पर्ने छ ।
तब राजाले हात जोडेर भने- 'महात्मन्‌! सबै प्रकारले धर्मको पालन गर्दा गर्दै पनि म आफ्नो राज्यमा दुर्भिक्षको दृश्य देखिरहेको छु । आखिर कुन कारणले यस्तो भइरहेको छ, कृपया यसको समाधान गर्नुस् ।' यो सुनेर महर्षि अंगिराले भने- 'हे राजन! सब युगहरू भन्दा उत्तम यही सत्य युग हो । यसमा सानो पापको पनि निकै भयंकर दण्ड मिल्दछ ।
यसमा धर्म आफ्ना चार चरणहरूमा व्याप्त रहन्छ ब्राह्मणका अतिरिक्त कुनै अन्य जातिलाई तप गर्ने अधिकार छैन । तषाईंको राज्यमा एक शूद्र तपस्या गरिरहेको छ । यही कारण भएर तपाईंको राज्यमा वर्षा भइरहेको छैन । जबसम्म त्यो काललाई प्राप्त हुन्न, तबसम्म यो दुर्भिक्ष शान्त हुनेछैन । दुर्भिक्षको शान्ति उसलाई मारेर नै संभव छ ।'
किंतु राजाको हृदय एक नरपराध शूद्र तपस्वीको शमन गर्नलाई तयार भएन । उनले भने- 'हे देव म उस निरपराधलाई मारी दिउँ, यो कुरा मेरो मन स्वीकार गरिरहेको छैन । कृपा गरेर तपाईं कुनै अरु उपाय बताउनुहोस् ।' महर्षि अंगिराले भने- 'आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत गर्नु । यस व्रतका प्रभावले अवश्य नै वर्षा हुनेछ ।'
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=हरिशयनी_एकादशी&oldid=754685" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २८ अक्टोबर २०१९, १३:०५